Akụkọ - Ọnụ ọnụ Cobalt gafere karịa atụ anya ma ọ bụ laghachi na ọkwa nwere ọgụgụ isi
Ọnụ ego Cobalt gafere karịa atụmanya ma ọ bụ na ọ ga-alaghachi na ọkwa ezi uche
Na nkeji nke abụọ nke 2020, ngụkọta mbubata mbubata nke cobalt raw ngwaọrụ bụ tọn 16800, yana mbelata afọ na 19%. N'ime ha, ngụkọta nke cobalt ore bụ tọn 0100 nke ụda ọla, na mbelata afọ nke 92%; ngụkọta mbubata nke ngwaahịa nke cobalt hydrometallurgy bụ tọn 15800 nke tọn tọn, na mbelata afọ nke 15%; ngụkọta nke mbubata cobalt na-ebubata bụ tọn 0800 nke ụda ọla, yana mmụba nke afọ na 57%.
Ọnụ ego cobalt dị n'ahịa ụlọ arịgoro nke ukwuu. Kemgbe etiti July, ọnụ ahịa nke cobalt electrolytic, cobalt sulfate na cobalt chloride amụbawo site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10% - 11%, nke dị elu karịa nke ọnwa May gara aga gara aga. Ọnụ ego ọnụ ọgụgụ nke cobalt electrolytic, cobalt sulfate na cobalt chloride site na May ruo June bụ naanị ihe dị ka 3-4%.
Mgbanwe ọnụahịa nke ngwaahịa SMM cobalt site na Mee 8 ruo July 31, 2020
Mgbe etiti June, ego a kapịrị ọnụ nke electrolytic cobalt na cobalt sulfate jiri nwayọ na-eru 1, tumadi n'ihi ọchịchọ maka ihe batrị
N'iji tụnyere ngwaahịa SMM cobalt site na Mee 8 ruo July 31, 2020
Site na Mee ruo June nke afọ a, naanị ihe na-akwado ịrị elu ọnụahịa bụ mmechi nke South Africa na Eprel, yana ụkọ nke akụrụngwa cobalt sitere na Mee ruo June. Otú ọ dị, ụlọ anụ ụlọ na-agbaze ngwaahịa ndị bụ isi ka na-emebiga ihe ókè, cobalt sulfate malitere ịpụta n'ọnwa nke ngwaahịa, isi ihe ka mma. Ebumnuche nke ala anaghị eme ka ọ dịkwuo mma, ka elebara elektrọnik nke 3C dị elu karịa ị nweta oge, ịrị elu ọnụahịa dị obere.
18650 Nimh, 3.7 Batrị na-akwụ ụgwọ, Batrị Lithium Ion Polymer, 12v Lithium Ion Batrị na-akwụ ụgwọ, Li Batrị, 12 Volt Rechargeable Lithium Batrị Pack, Ngwa niile